Ampidino Desktop Calendar ho an'ny Windows
Ampidino Desktop Calendar
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.50 MB)
Ampidino Desktop Calendar,
Ny Kalandrie Desktop dia iray aminireo rindranasa maimaim-poana sy mora ampiasaina ahafahanao miditra aminny kalandrie mora foana aminny alàlanny biraonao. Misaotra ny fampiharana izay antenaiko fa ho ampiasainireo izay mila manamarina ny fandaharam-potoanany, ny fivoriana ary ny kalandrie matetika, azonao atao ny mijery ny fandaharam-potoananao isaky ny mijery ny biraonao ianao.
Satria manana rafitra mora ampiasaina izy io, azonao atao ny mameno ny fanitsiana anao ary mametraka ny kalandrie eo aminny biraonao minitra vitsy aorianny fametrahana azy. Raha tsy tianao ny toerana apetraka aminny kalandrie ny kalandrie, azonao atao ny mamindra azy aminny toerana vaovao aminny tsindry vitsivitsy fotsiny mba tsy hifanindry aminireo sary masina hafa.
Ireo mpampiasa dia afaka mahatadidy mora ny daty na fihaonany aminny alàlanny fampiasana ireo safidy fampahatsiahivana hita ao aminilay programa. Noho izany, ny fampiharana dia azo ampiasaina tsy hanamarinana ireo andro ihany, fa mba hianaranao ny fandaharam-potoananao sy hampitandremana anao koa.
Mampalahelo fa tsy misy fandaharana aminny antsipiriany io programa io, noho izany dia afaka miavaka aminny fahatsorany izy, fa raha mitady programa fandaharana miaraka aminireo endri-javatra mandroso ianao dia tsy ho ampy izany hamaly ny filanao. Mino aho fa anisanireo rindranasa azonao zahana izany satria tsy miteraka olana izany mandritra ny fiasany ary tsy mandany ny harenny rafitra.
Desktop Calendar Specs
Haben'ny rakitra: 0.50 MB